Sarimihetsika 10 ambony indrindra azo jerena 2022 - Victor Mochere
Indraindray ianao dia mikaroka ny serivisy streaming mba hahitana zava-baovao sy mahaliana hojerena. Amin'ny fotoana hafa dia te hanao zavatra mahazatra ianao ary fantatrao fa tsy handiso fanantenana. Saingy tsy ny sarimihetsika rehetra no azonao jerena imbetsaka raha tsy manjavozavo. Saingy ireo sarimihetsika voatanisa etsy ambany dia mampanantena fa hihatsara amin'ny fijerena tsirairay. Ampiasao izy ireo mba hitazonana ny tenanao ho sahirana eo am-piandrasana anaram-boninahitra vaovao sy bebe kokoa hivoaka.
Ireto ny sarimihetsika 10 ambony indrindra azo jerena.
1. Miverina amin'ny ho avy (1985)
5. Indiana Jones sy ny Crusade Farany (1989)
Ny sarimihetsika Miverina amin'ny ho avy tany am-boalohany izay nilalao an'i Michael J. Fox ho Marty McFly dia nijoro tamin'ny fitsapana ny fotoana. Angamba izany dia manampy ny fanahy iniana apetraka amin'ny fotoana sasany amin'ny fotoana, ka amin'izany fomba izany dia tsy mahatsiaro ny daty. Saingy manerana izao rehetra izao ny lohahevitra jereny, ary ny vazivazy dia mbola misy dikany amin'ny fahatsapana maoderina.
Raha toa ka mbola tsy nahita izany ianao, Christopher Lloyd dia milalao mpahay siansa adala izay mamorona milina fotoana. Nampiasa izany tsy nahy ny namany tanora McFly mba hiverenana amin'ny fotoana nihaonan'ny ray aman-dreniny tany amin'ny lise. Tsy maintsy mahita ny toetran'i Lloyd tamin'ny lasa izy ary mandresy lahatra azy hanampy azy hiverina amin'ny ho avy, ary tsy hanova ny lasa amin'ny dingana.
Ity angamba no tsara indrindra amin'ny sarimihetsika Batman maoderina, miaraka amin'i Christian Bale ho toy ny crusader caped, ary Heath Ledger manome fampisehoana manaitra ho Joker. Ny fifangaroan'ny hetsika sy ny lohahevitra maizina momba ny maha-olombelona dia mahasarika ny mijery. Ary ny fampisehoana mahery vaika nomen'ny mpitarika rehetra dia midika fa afaka mijery azy hatrany hatrany ianao. Tsy hita? Batman dia miatrika ny fahavalony sarotra indrindra. Ahoana no handresenao ny olona iray izay ny hany faniriany dia ny hamorona korontana?
Maximus! Maximus! Maximus! Russell Crowe, tamin'ny fara tampony ara-batana, dia kintana toy ny jeneraly romanina nampietry noho ny tetika ara-politika ary voatery niady ho gladiatera. Tsy maintsy miady ho an'ny ainy izy, ny fanajany tena, ary ny hamonjena ny tanàna tiany, Roma, amin'ny fehezin'i Commodus, izay nolalaovin'i Joaquin Phoenix manam-pahaizana amin'ny anjara asany izay mampiseho ny fizotry ny maha Joker azy. Fanampin'izay dia misy seho miady mahatahotra sy rà ary gore mba hitazonana ny mpihaino ho faly.
Ity sarimihetsika ity dia ahitana andiana mpangalatra mangalatra tsiambaratelo amin'ny fidirana ao an-tsain'ny hafa amin'ny nofinofiny. Saingy ny tontolon'ny nofy dia manana ambaratonga maro, ary mora ny mamoy ny tenanao. Ity sarimihetsika mampiondrika saina ity dia manana atody Paska miafina maro ka afaka mahita zava-baovao ianao isaky ny mijery azy, ary mbola manana fanontaniana aorian'ny fijerena fahafolo. Leonardo DiCaprio dia mitarika mpilalao manaitra izay ahitana an'i Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt ary Marion Cotillard.
Azo inoana fa ny tsara indrindra amin'ny Sarimihetsika Indiana Jones, na dia manana raharaha aza ireo izay manohana ny sarimihetsika Raiders of the Lost Ark tany am-boalohany (ary hita ao amin'ny Netflix ihany koa). Niverina i Harrison Ford ho arkeolojista Indiana Jones, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nanatevin-daharana azy tamin'ny efijery ny Sean Connery tsy mampino ho rainy. Eo amin'ny lalan'ny grail masina izy ireo, miezaka ny maka ny tanany amin'ny vakoka masina alohan'ny hahitana azy sy hararaotin'ny Nazi ratsy.
Tsy Indiana Jones irery no mahery fo hiady amin'ny Nazi. Quentin Tarrantino dia mampitodika ny sainy amin'izy ireo ihany koa amin'ity sarimihetsika sarimihetsika ity. Manaraka andiana miaramila amerikanina sy tovovavy jiosy frantsay lava be mitady hanongana ny fitondrana ratsy izy. Saingy voasakana izy ireo isaky ny mandeha ny SS Officer Hand Landa, nilalao tsara an'i Christoph Waltz. Misy vazivazy mihoapampana sy tsy misy loko mameno ny 153 minitra amin'ity sarimihetsika ity.
Talohan'ny nisian'ny Inception dia nisy ny The Matrix, ilay sarimihetsika nampahafantatra antsika ny hevitr'izao tontolo izao ao anatin'ny tontolo ary nahatonga antsika hanontany tena hoe hatraiza ny tena fantatsika momba ny zava-misy kintan'i Keanu Reeves ho Neo, lehilahy tsotra, saingy misy fanontaniana. Tsy ela ny fanontaniany dia namela azy hahita fa tsy tena miaina ao amin'ny tontolo tena izy, fa tontolo iray noforonin'ny ordinatera. Io fahalalana io dia manome azy ny fahafahana manao zavatra tsy mampino, ary manome antsika sehatra tsy mampino.
Ity sarimihetsika nosoratan'i Tina Fey ity dia iray amin'ireo sarimihetsika be mpitia indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tena ilaina ny mijery fotsiny mba hampahatsiahy ny tenanao hoe avy aiza ireo references rehetra ireo. Lindsay Lohan dia kintan'ny zazavavy izay nianatra an-trano nandritra ny taona maro izay tonga tany amin'ny sekoly mahazatra. Tonga dia nifanena tamin'ireo tovovavy mangatsiatsiaka izy, ary nahita ny tenany niasa mba horaisin'izy ireo. Saingy tsy ela dia lasa lavitra loatra izy ary very ny tenany tamin'ny sary. Rachel McAdams dia nangalatra ny fampisehoana ho tovovavy manjaka Regina George.
Ity flick spiderman mirefy sarimiaina ity no karazana azonao jerena ombieny ombieny, satria manana sary an-tsaina maro samihafa momba ny maherifontsika misaron-tava. Fihetseham-po maromaro no ahitana spiderman vaovao iray manambatra hery miaraka amin'ireo spiderman isan-karazany avy amin'ny universe mifanitsy, anisan'izany ny spideman vehivavy sy ny spiderman noir notononin'i Nicolas Cage. Izy io dia iray amin'ireo sary tsara indrindra amin'ny tantara an-tsary ankafizina indrindra.
Ny toetran'ny seho amin'ity sarimihetsika ity dia midika fa io no karazana zavatra azonao alaina ao anatiny sy ivelanao nefa tsy mahatsapa ho tsy misy na inona na inona. Novokarin'i Judd Apatow, nosoratan'i Seth Rogan sy Evan Goldberg, ny kintan'ny sarimihetsika Jonah Hill sy Michael Cera ho toy ny sekoly ambaratonga faharoa tsy mety hanandrana sy hiala voly. Mahatsiaro ho toy ny dikan-teny ambany kokoa amin'ny The Hangover izy io. Tandremo ny McLovin ankafizin'ny mpankafy.
Fampiasam-bola 10 ambony indrindra any Kenya 2022
Top 20 olona be herim-po indrindra amin'ny fotoana rehetra